January 18, 2021 Xuseen 4
Puntlandtimes (Muqdisho)-Wasiirka Wasaaradda Warfaafinta Xukumadda Soomaaliya Cusman Abuukar Dubbe ayaa maanta kormeer ku tegey mashruuca dhismaha wadada isku xirta magaalooyinka Muqdisho iyo Afgooye.
Wasiirka ayaa mudadii uu ku sugnaa wadadaasi waxaa gacanta ku dhigay ammaankiisa ciidanka isda gaarka ah u tababaran ee Haram-cad, isagoona warbixin ka dhegaystay taliyaha ciidankaasi gaashaanle Dhexe Farxaan Maxamuud Aadan oo faahfaahin ka siiyey xaaladda ammaan ee wadada.
Wasiirka Warfaaginta oo hadlay ayaa Ciidanka Haramcad uga mahad celiyey sida ay ugu guuleysteen sugidda Amniga wadadaans, sidoo kale Wasiirka ayaa Mahad celin Ballaaran u Jeediyey Dowladaha Turki iyo Qatar oo Go’aansaday in la dhiso wadadaas oo aanan loo Joojin Weerarada Al-Shabaab.
Sidoo kale waxaa uu sheegay inay nasiib darro tahay in Maalin waliba Ciidamada Haramcad ee naftooda u huray dhismaha wadadaan in lagu dacaayadeeyo in dowladda Soomaaliya ay u adeegsanayso arrimaha doorashada.
Sheeko caruureed iga dheh warkaa.
Hal wasiir intaas oo ciidan ah daba yaacdo yaa umaqan
Masuulsare dadka iyo dalka waxaa ka shaqeynaya Dowladda Soomaaliya, adieu iskuday inaad kaalintaada ka qaado.
Waa tuuggii aanu ilmaadeerka ahayn, wallaahi inaanu meelna daacad ka soo gelin, afkiisa ayun igaga yidhi, In Kulmiye dawladdiisa oo uu ku burburay oo ilaa Seylac iyo Badhan inta u dhaxaysa gaadhigiisi ku googooyey haddana xil la ii diibi waayey, wallaahi baan ku dhaartee anigaygan hadlaya baa ka Soomaaliyeysan, ka jecel wansaga ummadda Somaliyeed, ka naxaya masaakiinta shacabka, waxiisu waa igu sawir, beenaale ah oo faanka jecel, cid igama xigto, haddii uu maba’iisa la tęgi lahaa, oo isaga oo aan xil u donnan Somaliland toos Xamar uga bilaabi lahaa, waan u garaabi lahaa;
Isaga, ninka Keyse la yidhaadho, ninka laga dhigay safiirka Canada, Amina Xaaji Yusuf, Sifir nin la odhan jiray, Mehdi guuleed, intuba waxaa soo tuftay Somaliland , waa qashinkii la nacay, Ninka sharafta leh ee meeshaa joogaa waa ninka farmaajo ugu neceb yahay, waa Cabdi Xaashi, weligii Somaliland ma iman, weligii xil uma doonan, weligii uma ololayn, weligii xil Somaliland iyo dastuurkeeda uma dhaaran, weligii ma aflagaadayn Somaliland, hadal xun ma odhan.